Milatariga Soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen maxkamado Shabaab leeyihiin | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Milatariga Soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen maxkamado Shabaab leeyihiin
Milatariga Soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen maxkamado Shabaab leeyihiin
Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya Taliska Ciidanka Mareykanka ee Africom ayaa howlgalo cir iyo dhul isugu jiray ku qaaday deegaanka Basra ee gobolka Shabeellada dhexe halkaasoo ay sheegeen inuu ku yaallay Saldhig ay leeyihiin dagaalameyaasha Al-Shabaab.
Howlgalka oo dhacay shalay galinkii dambe ayaa waxay Milatariga Soomaaliya sheegeen in lagu bur buriyey fariisimihii Al-Shabaab ee deegaanka waxaana ciidanku ooda ka qaaday maxaabiis badan oo u xirnaa shabaabka sidoo kale waxaa gacanta lagu dhigay xubno ka mid ah ururka Al-Shabaab sidda lagu sheegay war kasoo baxay ciidanka xoogga dalka.
Sarkaal ka tirsan saraakiisha howlgalka hogaamineysay ayaa u sheegay warbaahinta in howlaglka oo saacado socday lagu soo afjaray Al-Shabaabkii ku sugnaa degaankaasi oo uu sheegay in ciidanka dowladda ay soo weerari jireen.
Waxa uu sidoo kale tilmaamay inay burburiyeen Maxkamad ay leeyihiin Al-Shabaab oo ku taalla degaanka Basra ee gobolka Shabeelada dhexe.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Al-Shabaab oo looga hadlay howlgalkaan ay sheegeen Ciidanka xoogga dalka inay qaadeen deegaanka Basra ayna ku burburiyeen Saldhig iyo Maxkamad ay shabaabku lahaayeen.
Previous articleDHAGEYSO:Gabadh Soomaaliyeed oo ku guulaysatay abaalmarinta geesiyada dumarka ee sanadkaan
Next articleMaraykanka oo baaq u diray kooxda xuutiyiinta ee Yemen